धादिङ अावाज गजुरी धादिङ
भदाै ६ धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा १ मा रहेको चेपाङ छात्रावासमा बसि अध्ययन गर्दै अएका २३ जना चेपाङ बालिकालाई प्रयास नेपालले आर्थिक सहयोग दिइएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भएको बन्दाबन्दिले समस्यामा परेका चेपाङ छात्रालाई आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराएको हाे । आर्थिक सहयाेग हस्तान्तरण कार्यक्रममा गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले गजुरी गाउँ पालिकासँग समन्वय गरी चेपाङ किशोरीहरुको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको बताउनुभयो । गजुरी गाउँपालिमा विभिन्न सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था प्रयास नेपाल धादिङले गजुरी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ च्याङ्ली फेदीमा पुगेर अध्यक्ष बस्नेतले चेपाङ छात्रालाई प्रति बालिका ४ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको हो । गजुरी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ६ नम्बर वडाका १५ जनालाई शनिबार आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराइएको हाे । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका बाँकी आठजना बालबालिकाको परिवारलाई भोलि सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रयास नेपाल धादिङका सचिव विर बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । बन्दाबन्दिका कारण दैनिक समस्यामा परेका चेपाङ बालिकाहरूलाइ शैक्षिक सामाग्री तथा खाद्व्यन्य व्यवस्थापनमा सहयोग होस् भनेर आर्थिक सहयोग गरेको पनि सचिव श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेपछि खुशी व्यक्त गर्दै छात्रा सविना चेपाङले घरका लागि अत्यावश्यक नुन तेल चामल लगायत खाद्व्य सामाग्री र शैक्षिक सामाग्री खरिद गर्ने बताउनुभयो । अति विपन्न तथा बञ्चेतिकरण परेका समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि प्लानेट ईन्फान्ट एण्ड डेभलपमेन्टको सहयोगमा प्रयास नेपाल धादिङले गजुरी र बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकामा चेपाङ महिला तथा किशाेरीहरूकाे लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरि रहेको छ ।